QALABKA WAXTARKA LEH EE SLYTI, ISTICMAALKA DHIRTA DAAWADA - DHIRTA DAWOOYINKA
Sneep - dhirta dhirta leh ee ka tirsan qoyska dalladda. Waxay leedahay dherer ah oo ku saabsan hal mitir, xididku waa dheer, xoog leh, jirku waa god. Ciriiri caleemaha waaweyn iyo ubax midab cad, oo laga soo ururiyey dalladaha adag ee inflorescences. Waxay leedahay midho kulul oo dheer. Blooms xagaaga hore, iyo Bisaylkiisa wuxuu dhacaa bisha Agoosto.
Geedku wuxuu u koraa si uu u seexdo meel kasta. Iyadoo loo eegayo isticmaalka baahsan ee riyooyin, waxaa loo isticmaalay daawada dhaqameed, halkaas oo ay si joogta ah u cadeeyeen hantidooda faa'iido leh iyo waxtarka daawada.
Sneak: Waa maxay sababta dhirta loo isticmaalo?
Wakhti dheer, snyt waxaa loo isticmaalaa daawada sida qayb ka mid ah daroogada daroogada. Ugu horreyntii, slyt waxaa loo isticmaalay cuntada sida cuntada, si kastaba ha ahaatee, muujinta waxtarka wanaagsan ee khayraadka geedka, xitaa sida, waxay u horseeday isticmaalka warshadda ee daawada dhaqameed.
Hurdada ayaa si fiican u caawisa daaweynta gout, laabotooyinka, iyo cudurrada kale ee wada jirka ah. Waa sifooyin gaar ah kuwaas oo keena magaca asalka ah ee Latin, Aegopodium Podagraria, oo loo tarjumay "xanuunka lugaha."
Slyt, slyt, soodhada, habka waxtarka leh ee ka dhigi kara suurtagalnimada in lagu dabaqo daaweynta cuduro fara badan, waxaa ku jira fara badan oo ka mid ah jimicsiga, antibiyootigyada dabiiciga ah, astaamaha dabiiciga ah, cusbada potassium, manganese, magnesium, copper, birta, amino acids, fitamiinada A, saliidaha muhiimka ah, .
Sysht waxa kale oo ka mid ah fitamiin C, oo gacan ka geysta xoojinta xoojinta habka difaaca jirka, iyo sidoo kale bixinta tamarta jidhka iyo xoogga leh. Waa wax aan macquul aheyn in la ogaado in dhuxusha geedaha iyo isticmaalka uu leeyahay kansarka ka hortagga iyo saameynta antifungal on jirka.
Isticmaalka xashiishada noocaan oo kale ah waxay xoojisaa kilyaha, waxay hoos u dhigtaa heerarka kolesteroolka, waxayna sidoo kale taageertaa nidaamka dareenka.
Ma taqaanaa? Sannadihii dagaalladii iyo dagaalka ka dib, goobaha caadiga ah waxaa badanaa la diyaariyey oo u adeegay makhaayadaha dadweynaha. Caan ka mid ah saxankaan ayaa ahaa mid aan la maqlin, taas oo ah sababta shaqaalaha xaga cuntada ah ee xagaaga had iyo jeer u sameyeen kayd ballaaran oo geedka this jiilaalka.
Sida loo diyaariyo oo lagu kaydiyo riyo
Sida a kiimikada ceeriin, caleemaha yar yar iyo caleemaha geedka waxaa badanaa la isticmaalaa. Roots waxaa loo isticmaalaa si aad u yar.
Sneak wuxuu bilaabaa inuu ururiyo xitaa inta uu biloowga hore bilaabmayo. Khidmadaha ugu horreeya waxay billaabaan bilowga Maajo. Waxaa habboon in la ogaado in goosashada goos goos ah ay siinayso fursad ay ku ururiso alaabta ceyriinka oo dhan xagaaga.
Waa muhiim! Ka dib marka cawska la ururiyo waxaa si adag loo mamnuucayaa in la maydho, tanina waxay si weyn u yareyneysaa waqtiga kaydinta.
Waxaa lagama maarmaan ah in la qalajiyo cawska la soo ururiyey ee hawada furan, waa mid la jecelyahay kaamaji ama qol leh hawo wanaagsan. Cawska ayaa la gooyaa lakab khafiif ah waana in laga ilaaliyaa qoraxda tooska ah.
Waa suurad wacan in la dhamaystiro dhamaadka qalajinta by xoog, iyadoo la isticmaalayo qalajiyaha korantada ama habab kale oo macquul ah. Alaabta ceeriin ee la diyaariyey waa in lagu kaydiyaa boorsooyinka warqadda, kaas oo kuu oggolaanaya inaad ku keydiso adiga oo aan lumin guryaha guryaha oo ka badan hal sano.
Waa muhiim! Ku keydinta muraayadaha wax lagu qoro waa mid aan loo baahneyn, sababtoo ah waxay ku dhowdahay in ay bilawdaan.
Hadday lagama maarmaan noqoto, roodhida rhizomes ayaa sidoo kale la goostay. Tani waa in la sameeyaa isla markiiba ka dib dhirta ubaxyada. Habka loo qalajiyo xididada waa isku mid. Farqiga ugu weyni waa habka kaydinta. Sidaa darteed, xididka Snyti la soo ururiyey waa in lagu kaydiyaa weelasha alwaax.
Ma taqaanaa? In muuqaalka, snyt caadiga ah waxay la mid tahay dhowr ah dhirta kala duwan, kuwaas oo aan kaliya ma ahan waxtar, laakiin mararka qaarkood gebi ahaanba sumowga. Awowayaasheen, oo bilaabay horumarinta warshadan ujeedadoodu u gaarka ah, waxay hubisay tayada iyo u hoggaansamida caawinta xayawaanka guryaha - waxay si fudud u diideen in ay qaataan kobaca sunta.
Qalabka Faragelinta ee Slyti
Sony waa warshad daaweyn ah oo leh qalab daaweyneed oo waxtar leh. Sidaa daraadeed, walxaha ku jira Slyti, waxay kuu oggolaanayaan in aad si wacan u dareento jirkaaga.
Qolofoolikada iyo xayawaanka maqaarka ee hurdo la'aanta waxay la mid yihiin daawooyinka ugu wanaagsan ee casriga daawada iyo ka jawaabida dhammaan baahida daawooyinka. Intaa waxaa dheer, khabiiradu waxay yaqiinsanaan waxtarka sare ee arrimaha antispasmodic, dheecaan uur-qaadida, sedion-ka, detoxification iyo saameynta xasiloonida jirka bukaanka.
Isticmaalka ujeedooyinka caafimaad waxay suurtogal u tahay in ay si weyn u xakamayso geeddi-socodka nabarrada, yaraynta xanuunka wadarta, yareeya astaamaha xasaasiyadda alerjiga, ay leedahay fal-celinta antifungal iyo antibacterial. Xaaladaha qaarkood, sifooyinka faa'iidada leh ee xajinta ayaa ka hortagaya sameynta xinjiro dhiig.
Qeybaha dhulka ku yaala waxaa ku jira fara badan oo ah carotene, taas oo ah antioxidant xoog leh, sidoo kale wuxuu leeyahay saameyn togan maaha oo kaliya nidaamka difaaca jirka, laakiin sidoo kale dhamaan nidaamka jirkiisa.
Waxyaabaha kale ee ay ka mid yihiin, snyt waxaa lagu uruuraa ascorbic acid, taas oo aan loo baahnayn bini-aadanka, laakiin aan la soo saari karin jirka, laakiin waxaa laga helaa cuntada.
Isku-dhafka gaarka ah ee farshaxanada farshaxanka ilaa taariikhda ayaa sababay xaalad ah in qof kastaa uu ogyahay waxa la seexdo.
Isticmaalka hurdada daawada dhaqanka
Sanadihii ugu dambeeyay, waxaa si weyn loo isticmaalaa daawada dhaqameed. Snyt, suuqyada waxtarka leh iyo cuntooyinka waxtarka leh ee lagu yaqaanay dhammaanba bogsashooyinka, hal qaab ama mid kale ayaa si wax ku ool ah ula tacaalaya cudur kasta, iyada oo aan loo eegin dabeecadda.
Xilligan, waxaa la ogaadaa oo la caddeeyaa in isticmaalka hurdada ay raacaan dadka raacsan daawada dhaqameedku ay daaweyn karaan gout iyo cudurada bararsan.
Snyt, isticmaalka kuwaas oo leeyahay qalabka xanuunka iyo anti-bararka, fududaynaya calaamadaha cudurrada, iyo sidoo kale waxay suurtogal u tahay in si weyn loo yareeyo geeddi-socodka bararka ee muruqyada qalfoofka.
Dhaqanka quruumo badani waa daaweynta dermatitis atopic iyo erysipelas iyadoo la adeegsanayo caleemaha iyo caleemaha ugu horreeya ee qotoda caadiga ah. Intaa waxaa dheer, ee cuntada ee daawada dhaqameed, isticmaalka dhirta this lala xiriiriyaa hagaajinta shaqada ee mindhicirrada, caloosha, beerka iyo kelyaha.
Iyadoo lagu saleynayo sifooyinka qoyaanka ee dhirta, bogsashadu inta badan waxay doortaan inay seexdaan daaweynta cudurrada nidaamka dareenka. Xitaa waqtigeena, decoctions iyo infusions of hurdada ayaa lagu talinayaa in lagu daaweeyo cudurada fangas iyo dermatitis.
Waa wax aan macquul aheyn in la ogaado in cuntada sida caadiga ah ee daawada dabiiciga ah ee loo yaqaan 'sytya' ay kala duwan tahay. Waa wax ku ool ah anemia, yaraanta vitamin, hypovitaminosis, scurvy, edema, iyo sidoo kale in la nadiifiyo jirka sunta iyo sunta.
Ma taqaanaa? Sheekooyinku waa kiisaska la og yahay marka ay dadku noqdaan hermits, oo loo isticmaalo si khaas ah cuntada iyo daawada. Mid ka mid ah kuwan waxay ahaayeen Rev. Seraphim ee Sarov.
Markaad qaadato decoctions iyo infusions
Iyada oo ay sabab u tahay qadarka mucaawinada mukhaadaraadka, slyt si guul leh ayaa loo isticmaalaa daaweynta cuduro badan. Waxaa intaa dheer, waxaa badanaa loo isticmaalaa cuntada. Si kastaba ha noqotee, si aad si buuxda u hesho natiijada la rabo, waxaad u baahan tahay inaad si cad u ogaatid dhammaan xeerarka isticmaalka.
Syati infusions waxaa loo isticmaalaa haddii loo baahdo in la nadiifiyo dhaqdhaqaaqa jirka, iyo sidoo kale saarista sunta. Intaa waxaa dheer, hurdadu waxay buuxisaa fitamiinada maqan, macro iyo nafaqeeyayaal yar yar.
Cabbiraadaha iyo gogol-xoqidda dhirtaas ayaa lagu xaqiijiyay in ay noqdaan kuwo fangicidal iyo bakteeriyaal wax ku ool ah. Iyadoo la socoto dhibaatooyinka kor ku xusan, maskaxaha iyo infusions ee lulmoodku waxay caawiyaan sidii ay ula qabsan lahaayeen cuncun, cuncun iyo cudurrada maqaarka.
Isticmaalka dhirta daawada dadku waxay ka adkaan kartaa dhiig-yaraanta, dhiig-yaraan, dhiig-karka. Waxaa sababa waxyaabo sarreeya oo bir ah iyo waxyaabo kale oo raad raac ah. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la sheego xaqiiqda ah in decoctions iyo infusions loo isticmaalo daaweynta laabotooyinka, gout iyo caabuq wadaag.
Horaantii, markii la heli karay daawooyinka daawooyinka aan sida caadiga aheyn oo wax ku ool ah, dhirta daawada ayaa ah habka keliya ee lagu daweeyo cudurrada kala duwan, iyada oo aan loo eegin darnaanta. Mid ka mid ah dhirta ugu faa'iido badan waxay ahayd hurdada.
Tinctures iyo decoctions, oo ku saleysan hurdiga, loo oggol yahay in laga takhaluso cuduro badan. Cuntooyinka kala duwan ee ku saleysan nacaybka si firfircoon ayaa loo isticmaalaa waqtigayaga.
Decoction ah ee slyti Diyaarinta sidan soo socota: 4 qaado shinbir ah waa in lagu shubaa galaas biyo karkaraya oo lagu hayo qubeys biyo ah 20 daqiiqo, ka dibna xoqin oo ku shub 200 ml oo biyo ah. Qaado maraqaankan waxaa lagula talinayaa 8-dii saacadoodba mar 3-4 maalmood.
Diyaarinta liistada Waxaad u baahan tahay inaad ku shubato 3 qaado oo ah geedo la jajabiyey ee warshadda leh 1 liitar oo biyo nadiif ah la kariyey iyo ka tag meel diiran 3-4 saacadood. Taas ka dib, tincture waa la sifeeyaa loona qaaday 100 ml 6-8 saacadood 3-5 maalmood.
Waa muhiim! Waxaa fiican in la diyaariyo tincture ee weelasha galaaska, maadaama ay alwaax ama alwaax caag ah ma aha oo kaliya hoos u dhigi kara geedi socodka ee faleebo, laakiin sidoo kale ka dhig qalabka yar waxtar leh.
Daawada dhirta waxaa si fiican loo darsay fikradda farshaxanka. Iyada oo ay ku xiran tahay hantideeda, dhirtu ma lahan wax ka horjeeda, marka laga reebo dulqaad shakhsi ahaaneed ee qaybaha shakhsiga ee halabuurka dhirta.
Aragtidaas, soo dhoweynta muddada-dheer ee loogu talagalay ujeedooyinka caafimaadka waxaa si xoog leh lagula talinayaa inay ka hormaraan baaritaan caafimaad iyo la-talin caafimaad.
Snyt si sax ah ayaa loo isticmaali karaa ujeedooyin daaweyn. Siyaabaha ururinta, isu diyaarinta iyo u diyaarinta waraaqaha waa sahlan oo la heli karo qof kasta, xitaa kuwa aan lahayn xirfado khaas ah.